လွန်းညတောင်တန်းက သမိုင်းဝင်လိုဏ်ဂူကြီး – Lawkathuta
ဗဟုသုတအစုံ May 9, 2018
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ် လွန်းညစံပြကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကမ္ဘာ့လိုဏ်ဂူများသုတေသနလေ့လာ ရှာဖွေနေသောအဖွဲ့ဖြစ်သည့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပြင်သစ်နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းအဖွဲ့သည်အိန္ဒုနှင့်မိုက်အောင်ကျေးရွာအနီးတွင်အိန္ဒုရွာသားတို့၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်လွန်းညတောင်တန်းရှိသမိုင်းဝင်လိုဏ်ဂူကြီးကိုသွားရောက်လေ့လာသုတေသနပြုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါလိုဏ်ဂူသည် ကော့ကသောင်ဂူထက်ကြီးမားနေသည်ကိုလည်း သိရှိရပါသည်။သမိုင်းကြောင်းအရ ဘိုးဘွားလက်ထက်တွင် ယိုးဒယားများ ကရင်လူမျိုးတွေကိုယိုးဒယားနိုင်ငံသို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန် ဤဂူအတွင်းသို့ကရင်လူမျိုးတွေကိုစုပြီးယိုးဒယားသို့ခေါ်ဆောင်ရန်ခေတ္တထားသည့်နေရာဟုဘိုးဘွားတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။
အဆိုပါဂူကြီးကိုထိန်သိမ်းပြီး သဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု အိန္ဒုရွာနေသူတစ်ဦးကပြောကြားသွားပါတယ်။
crd . . လွန်းညစံပြကျေးရွာ –
ကရငျပွညျနယျ ဘားအံမွို့နယျ လှနျးညစံပွကြေးရှာအုပျစုတှငျ ကမ္ဘာ့လိုဏျဂူမြားသုတသေနလလေ့ာ ရှာဖှနေသေောအဖှဲ့ဖွဈသညျ့ဆှဈဇာလနျနိုငျငံပွငျသဈနိုငျငံသားမြားပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျအိန်ဒုနှငျ့မိုကျအောငျကြေးရှာအနီးတှငျအိန်ဒုရှာသားတို့၏လမျးညှနျမှုဖွငျ့လှနျးညတောငျတနျးရှိသမိုငျးဝငျလိုဏျဂူကွီးကိုသှားရောကျလလေ့ာသုတသေနပွုခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါလိုဏျဂူသညျ ကော့ကသောငျဂူထကျကွီးမားနသေညျကိုလညျး သိရှိရပါသညျ။သမိုငျးကွောငျးအရ ဘိုးဘှားလကျထကျတှငျ ယိုးဒယားမြား ကရငျလူမြိုးတှကေိုယိုးဒယားနိုငျငံသို့ဖမျးဆီးချေါဆောငျရနျ ဤဂူအတှငျးသို့ကရငျလူမြိုးတှကေိုစုပွီးယိုးဒယားသို့ချေါဆောငျရနျခတ်ေတထားသညျ့နရောဟုဘိုးဘှားတှရေဲ့ပွောပွခကျြအရသိရပါတယျ။
အဆိုပါဂူကွီးကိုထိနျသိမျးပွီး သဘာဝခရီးသှားလုပျငနျးဖှငျ့လှဈနိုငျရနျကွိုးပမျးသှားမညျဟု အိန်ဒုရှာနသေူတဈဦးကပွောကွားသှားပါတယျ။
crd . . လှနျးညစံပွကြေးရှာ –
တန်ဖိုးမထားချင်နေပါလေးစားမှုတော့ရှိပါ – မူလီတစ်ချောင်းဟာ လမ်းမပေါ်မှာ ကျနေရင်တော့ ဘာမှသုံးစားမရတဲ့ အမှိုက်ဖြစ်နေပေမယ့် ဒေါ်လာသန်းချီတန်တဲ့လေယာဉ်တစ်စီးအတွက်တော့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ – ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ မိန်းကလေးဆိုပြီး အထင်သေးတော့မလို့လား? – မဟုတ်သေးဘူးနော်… သူ့ကို လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိရက်လောက်အောင် တန်ဖိုးထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်တော့ သူ့မှာ ရှိနေနိုင်တယ်လေ။ …
တစ်ပတ်အတွင်း ၀က်ခြံ၊ အမာရွတ် ပျောက်နည်း–
( ၁ ) နံ့ သာဖြူမှုန့် နဲ့နှင်းဆီရည် နံ့ သာဖြူ မှုန့် နဲ့ နှင်းဆီရေကိုပျစ်ပျစ် ဖျော်စပ် ပြီး၊ အမာရွတ် ပေါ်တိုက်ရိုက် လိမ်းပေးပါ။အချိန် ၁ နာရီ ကျော်ထားပါ ( သို့ မဟုတ် ) …
သူ့မှာ ဒီလိုအကျိုးပြုတဲ့ စွမ်းအားတွေ ရှိနေပါရက်နဲ့ မသမာသူတွေကြားမှာ မကောင်းသတင်းတွေနှင့်သာ လူသိများနေတဲ့ ဆေးခြောက် (Marijuana)
ဆေးခြောက်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများက အစိုးရတွေက အသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ထားပေမယ့် အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဆေးခြောက်ကို နာကျင်တဲ့ဝေဒနာ၊မအီမသာဖြစ်တာနဲ့အခြားသောရောဂါတွေကို ကုသရာမှာအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာ အသုံးဝင်မှုတွေရှိနေတဲ့ ဆေးခြောက်ကို ဆေးခြောက်ပင်ရဲ့ အရွက်တွေနဲ့အဖူးတွေကို အခြောက်ခံပြီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခြောက်ကိုဖွာရှိုက်တာ၊ ရှုတာနဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ရေနွေးထဲကိုထည့်ပြီးမှီဝဲလို့ရပါတယ်။ ဆေးကုသတဲ့နေရာမှာ ဆေးခြောက်ကို ဆေးပြားအနေဲ့ရော အဆီအနေနဲ့ပါအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဆေးခြောက်ကို နာကျင်တာသက်သာစေဖို့၊မအီမသာဖြစ်တာကိုလျော့ပါးသက်သာစေဖို့နဲ့ အခြားသောဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလျော့ပါးသက်သာစေဖို့နဲ့ ရောဂါအချို့ကိုကုသရာမှာပါအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ …
မေမြို့ခေါ် ပြင်ဦးလွင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
မေမြို့ခေါ် ပြင်ဦးလွင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ************** . မေမြို့၊ပြင်ဦးလွင်၊ ပန်းမြို့တော်၊ တောင်လှေကားမြို့ဟူသောအမည်နာမများစွာ ပိုင်ဆိုင်သည့်မြို့ကလေးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများရောက်ဖူး ကြသလို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှစ်သက်သောမြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ပြင်ဦးလွင်ကလူစိတ်ဝင်စား ရသည်ကို ညွှန်းရမည်ဆိုလျှင်ပြင်ဦးလွင် ပိုင်ဆိုင်သောဂုဏ်ပုဒ်များစွာရှိနေပါသည်။ မေမြို့ပန်းနှင့်ဂန္ဓမာထွက်သောမြို့၊ ဆွယ်တာမြို့၊စံဂျူးမလိုင်မြို့၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မြို့၊ကော်ဖီနှင့်ယိုမျိုးစုံထွက်သောမြို့၊ ဗိုလ်လောင်းမြို့၊ ရထားလုံးရှိသောမြို့၊ အလှဆုံးပန်းခြံရှိသောမြို့၊ဘော်ဒါကျောင်း၊ နွေရာသီတွင်လူတိုင်းတောင့်တ သောတောင်စခန်းမြို့၊ …
အလှည့်ကျ ပျိုတော်များ နှင့်မင်းတုန်းမင်းကြီး –ဘာတွေလုပ်..
မင်းတုန်းမင်းကြီးဟာ အရှင်ဘုရင်ဆိုပေမယ့် အေးအေးဆေးဆေး ဇိမ်ခံနေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ သူ့ချိန်ဇယားနဲ့သူ အလုပ်အလုပ်လုပ်နေခဲ့တာကို ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မနက်စောစော ၅ နာရီခွဲလောက်မှာ အိပ်ရာကထတယ် ။ အပြင်မထွက်ခင် အလှည့်ကျ မိဖုရားများက သလွန်တော်အောက်ကနေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဆီတော်များနဲ့ ပွတ်လိမ်းပေးရတယ် ။ ခေါင်းလိမ်းဆီ ၊ ကိုယ်လိမ်းဆီ …